> Resource > Video > Sidee si fudud jeex Your Video Files
Ma rabtaa inaad cad ama weyn ama dheer files video si ay u xaalkaa qaybaha qaarkood? Ama kaliya jar qaybaha aan la rabin ee aad fiidiyo video si loo badbaadiyo bannaan ee drive adag? Halkan waa xalka: heli video slicer ah si fudud loo isticmaali karo sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Dhab ahaantii, fudud sida loo hanuuniyo heli doontaa in aad bilowday.
1 dejinta aad video files in this Video Editor
Fur barnaamijka Filmora ah; kala doorto 16: 9 ama 4: 3 saamiga si ay u bilaabaan mashruuc cusub. Markaasay aad u baahan tahay si ay u dajiyaan aad video files kombiyuutar si ay video magaabay this. Waxaa jira laba siyaabood oo dabacsan si ay u sameeyaan: Mid ka mid ah waa in ay button Import riix si aad ku shuban iyo dajiyaan aad video files, kan kale waa in ay si toos ah jiidi oo hoos u faylasha aad barnaamijka. Marka aad soo dhoofsadaan faylasha video, ay muujiyaan waa in album User ee gudaha Filmora.
2 jeex aad video files
Marka aad dajiyaan oo dhan files video, jiidi mid ama ka badan clips in waqtiga laga bilaabi karo habka tafatir ah. Markaas si fudud u jiidi clips si aad rabto in loo arko in aad video.
Ka dib markii in, ku dulqabo ka badan hal dhibic ee clip meesha aad rabto in la abuuro fasax ama laga gooyay. Markaas riix qalab icon Split kor ku xusan waqtiga oo u ekaan sakiinta iyo Filmora si toos ah u abuuri doonaa laba gooni ah video clips ka mid ah clip kaliya. Haddii aad rabto in aad cad ama video files qaybo ka badan, kaliya celiyaan tafatirka this.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad badbaadin mashruuca loogu gurmad ujeedada, riix badhanka ee geeska bidix ee kore ee editor video this, ka dibna dooro "Save sida" doorasho.
3 dhoofinta jarjaran video files
Ka dib markii aad samaysay geeddi-socodka oo tuban ah, ku eegaan video ay u arkaan natiijada. Markaas muujiyo video file jarjaran aad rabto in aad badbaadin on waqtiga iyo guji Abuur inay u dhoofiyaan. Daaqadda pop up ka, waxaad ka dhacay karaa tab Qaabka iyo dooran si loogu badalo aad video galay in ka badan dersin of qaabab kala duwan iyadoo hal click. Ama si fudud u badbaadin iyo ciyaaro aad videos gal iPhone (5, 4 iyo 3), iPod, iPad, Samsung iyo telefoonnada gacanta HTC, PSP iyo sidoo kale qalab kale oo ay taageerayaan in tab Device ah. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa clip eee YouTube iyo Facebook la dhibaatana ma leh ama waa inuu ku gubaa si DVD ah keepsake.